မနော်သော့သွဲ့ထူးအတွက် ကျပ် ၃၄ သိန်းကျော် စင်ကာပူအလုပ်ရှင် ထပ်မံလွှဲပေး by popolay.com
မြောက်ကိုရီးယားကို အပြည့်အဝ ထောက်ပံ့မည်ဟု တရုပ်သမ္မတ ကတိပြု
မြန်မာတွေကို ဆက်ကြေးတောင်းတဲ့ မြန်မာ မာဖီးယားဂိုဏ်းအား ထိုင်းရဲများ ဖမ်းဆီး
ဖုန်းအားသွင်းရာမှ ဓါတ်လိုက်ပြီး နာမည်ကြီး ပိုကာ(ဖဲ)ဘုရင်မ သေဆုံး
သမီးအရင်းကို အဓ္ဓမပြုကျင့်တဲ့ ဖခင်အား အပြစ်မရှိဟု တရားရုံးဆုံးဖြတ်ကာ တရားသေလွတ်
ဆီးဂိမ်းတွင် ရွှေတံဆိပ်ရရှိသည့် ပြေးခုန်ပစ်ကစားသမားများအား တိုက်ခန်းတစ်ခန်း ကားတစ်စီး ဆုချီးမြှင့်မည်
၁၀ တန်း ကျရှုံးတဲ့အထိမ်းအမှတ်နဲ့ အလှူပွဲကျင်းပ
ကျောင်းသားလေးများအား လှူဒါန်းရန် စင်ကာပူမှ စက်ဘီးများ ဝယ်ယူတင်သွင်း
ရေခဲချောင်းရောင်းသူထံမှ မူးယစ်ဆေး သိန်း ၁၆၀၀ ကျော်ဘိုး ဖမ်းမိ
၂ နှစ်သမီးလေးအတွက် ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျခဲ့တဲ့ ‘အဖေများနေ့’
စိတ်ဆိုးပြီး တစ်နှစ်သား ကလေးကို ခြောက်လွှာကနေလွှင့်ပစ်ချရာ သေဆုံး
စက်လှေကားတွယ်စီးရင်း ဦးခေါင်းညပ်ပါသွားတဲ့ မိန်းကလေး (ရုပ်သံ)
၅ တန်းကျောင်းသားက စည်းကမ်းတင်းကြပ်လွန်းတဲ့ ဆရာကို ဓားနဲ့ထိုး
The Voice Myanmar Season2နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ဖခင်ကြောင့် ကလေးရင်ကြပ်ရောဂါရနိုင်
အိပ်ယာအသုံးအဆောင်တွေ မကြာခဏလျှော်ဖို့ ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ..?
ဆယ်ကျော်သက်လေးကို လှပနုပျိုနေတဲ့ အသက် ၅၀ နီးပါး မိခင်ရဲ့ လျှိုဝှက်ချက်
မဖြစ်မနေပိုက်ဆံစုသင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း (၇)ချက်
iOS 13 မှာ ပါဝင်လာမယ့် အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်ချက် ၁၅ ခု
အိုမင်းလွယ်ရောဂါ ခံစားနေရတဲ့ ၁၂ နှစ်သမီးလေး အွန်လိုင်းအကျော်အမော်ဖြစ်လာ
ဘဝမှာ အသက်မရှင်ချင်တော့လောက်အောင် စိတ်ညစ်နေရင် ဒီရုပ်သံ ကြည့်ပါ
ပရိတ်သတ်ကို မချေမငံပြောဆိုမိတာကြောင့် အပြစ်တင်ခံနေရတဲ့ Ha Yeon Soo
သီလရှင်ဝတ်ပြီးပြောင်းလဲလာတဲ့ စိတ်သဘောထားအကြောင်းပြောပြလာတဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း
အလန်းစားဖက်ရှင်တွေနဲ့ အေးမြတ်သူရဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်များ
မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အလှအပနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သူမရဲ့ခံယူချက်ကို မျှဝေလာတဲ့ Cho Yeo Jung
ဘာစီလိုနာအသင်းကို တစ်ကျော့ပြန် ပြန်ရောက်လာဖို့ရှိနေတဲ့ နေမာ
ဒီတစ်ပါတ်အတွင်းမှာ ချဲလ်ဆီးအသင်းက လမ်းပတ်ကို နည်းပြအဖြစ်ခန့်အပ်သွားမည့် သတင်းနှင့် ချဲလ်ဆီးသတင်းတိုများ
အသင်းကနေ ထွက်မယ်လို့ ပြောလာတဲ့ ပေါ့ဘာကို မန်ယူအသင်းက လစာတိုးပေးပြီး စာချုပ်သက်တမ်းတိုးသွားမည်
“ ဘုရားပေးတဲ့လက် ” သွင်းဂိုးက ဖော့ကလန်စစ်ပွဲအတွက် လက်စားချေခဲ့တာပါဆိုတဲ့ မာရာဒိုနာ
ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့အတွက် မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင်ဖို့ “ဖိုးသော်” ပြင်ဆင်နေ
အိမ်ရာမဲ့တွေအတွက် လုံးချင်းအိမ်တွေ ဆောက်ပေးနေတဲ့ MMA ဖိုက်တာကြီး မက်ဂရီကော်
သတင်းထောက်မကို ကြွေပြီး အနမ်းပေးလိုက်တဲ့ လက်ဝှေ့ကျော် တရားစွဲခံရ (ရုပ်သံ)
နာမည်ကြီး နပမ်းသမားတစ်ဦး နပမ်းသတ်စဉ် ကြိုးဝိုင်းအတွင်း သေဆုံး (ရုပ်သံ)
မနော်သော့သွဲ့ထူးအတွက် ကျပ် ၃၄ သိန်းကျော် စင်ကာပူအလုပ်ရှင် ထပ်မံလွှဲပေး
10 Jan 2019 7,876 Views
တစ်သောင်းကျပ်တန် ငွေစက္ကူအတုများ တွေ့ရှိမှုဖြင့် ဖမ်းဆီးတရားဆွဲဆိုခံခဲ့ရသော နော်သော့သွဲ့ထူး အား စင်ကာပူနိုင်ငံမှ သူမ၏ အလုပ်ရှင်ဖြစ်သူက နစ်နာနာကြေးအဖြစ် မြန်မာကျပ်ငွေ ၃၄ သိန်းကျော် ပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
နော်သော့သွဲထူး သည် စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် အိမ်အကူအဖြစ် ၃ နှစ်ကြာ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာပြည်သို့ အပြီးပြန်လာရန် စီစဉ်စဉ် အိမ်ရှင် ဖြစ်သူက သူမ၏ လုပ်အားခများကို စင်ကာပူ ငွေလွှဲဌါနတစ်ခုတွင် မြန်မာကျပ်ငွေအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးခဲ့သည်။
မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်သည့်အခါ စင်ကာပူတွင် လဲလှယ်ခဲ့သော မြန်မာကျပ်တစ်သောင်းတန် ငွေစက္ကူများ အတုဖြစ်နေခဲ့ပြီး ငွေစက္ကူအတု လက်ဝယ်တွေ့ရှိမှုဖြင့် ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရသည်။
ယခုအခါ စင်ကာပူအိမ်ရှင်မှ ငွေစက္ကူအတုများကြောင့် သူမဆုံးရှုံးနစ်နာခဲ့သော လုပ်အားခငွေ ၂၉ သိန်း ၆ သောင်း ကို ပြန်လည်ပေးအပ်သည့်အနေနဲ့ ကျပ်ငွေ ၃၄ သိန်းကျော်ကို ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်နေ့က ဒိုက်ဦးမြို့နယ်က ဘဏ်တစ်ခုသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်သူ ဦးလှဝင်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
" မနေ့က လွှဲပေးလိုက်တာပါ။ သူဆုံးရှုံးသွားတဲ့ ၂၉ သိန်းခြောက်သောင်း အစားကို အခု ၃၄ သိန်းအစွန်းထွက်လေးကို လွှဲပေးလိုက်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ပြည်သူက နစ်နာတဲ့အတွက် အခုလို နစ်နာကြေးပြန်ပေးတာ ဝမ်းသာတာပေါ့။သူရသင့် ရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးပဲ။ သူများနိုင်ငံမှာ အလုပ် လုပ်ပြီးတော့ ငွေတုတွေနဲ့ တိုးပြီးတကယ်နစ်နာတဲ့အပြင်ကို အဖမ်းပါခံရတယ်ဆိုတော့ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုလို့မြင်တယ်။ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တယ်လို့ထင်တယ်" ဟု ဦးလှဝင်းက ရှင်းပြသည်။
လက်ရှိတွင် နော်သော့သွဲ့ထူးအနေဖြင့် ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၀၅ ကို ဆက်လက်ဖြေရှင်းရန်ကျန်ရှိနေသေးပြီး၊ လာမည့် ဇန်နဝါ၇ီ ၁၇ ရက်တွင် ဆက်လက်စစ်ဆေးရန် ချိန်း ဆိုထားကြောင်းသိရသည်။
>> ငွေစက္ကူအတုများနဲ့ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ဒိုက်ဦးမြို့က မိန်းကလေးကို တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးနဲ့အဖွဲ့ကူညီ
Most Popular of Myanmar News
အစိုးရဝန်ထမ်းများ ပင်စင်ယူပြီးပါက နေစရာအိမ်ပါရရှိတော့မည်
ကားမောင်းလာတဲ့ပြည်သူများကို အနိုင်ကျင့်နေတဲ့ ပြည်သူ့ စစ် ( ရုပ်သံ )
ရွှေတစ်ကျပ်ခွဲသားကြိုးကို ဆိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် ဆွဲပေးလိုက်ရတဲ့ ‘တို့ဆေး’
အလိုလိုက်မိလို့ ၅ နှစ်သားလေး သွားများရေစီးကမ်းပြိုလိုက်
ဘေဘီ.. မင်းကိုယ့်ကို လိမ်ရတာ ပျော်ရဲ့လား..? ပျော်ပါစေ.. ဆိုတဲ့ လူငယ်
ယတြာချေဖို့ ကလေးကို ခိုးယူခဲ့ပြီး ၂၆ နှစ်ကြာမှ မိခင်ရင်းထံပြန်အပ် သို့သော်..
မေးရိုးမပါပဲ မွေးခဲ့ပြီး စကားမပြောနိုင်ပေမယ့် Rapper ဖြစ်လာတဲ့လူငယ်
ရေအောက်လှောင်ချိုင့်ထဲကနေ လွတ်မြောက်ရန် ကြိုးစားပြတဲ့ လူစွန့်စား ပျောက်ဆုံး
အလှပဆုံး အနားသတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ The Voice Myanmar FINAL Show ည